Sabti, Febraayo 5, 2011 Douglas Karr
Waqti ka waqti, waxaan leenahay rajooyin noo yimaada oo na weydiiya inaan meel isugu geyno xigasho mashruuc ku saabsan hagaajinta mashiinka raadinta. Dadyohow, mashiinka raadinta ma aha mashruuc. Maaha dadaal aad dhab ahaantii dhameyn karto maxaa yeelay waxaad weerareysaa bartilmaameed dhaqaaq ah. Wax walba waxay ku beddelaan raadinta:
Mashiinnada raadinta ayaa isku hagaajiya algorithms-ka - Google waxay si joogto ah u hagaajinaysaa si ay uga horjoogsato khayaamoleyda iyo, dhowaan, beeraha waxyaabaha ku jira. Fahamka sida loo soo bandhigo waxyaabahaaga marka isbeddeladan ay dhacaan ayaa hagaajin kara natiijooyinkaaga. Isku hagaajin la'aan ayaa ka dhigi karta goobtaada inay aasan tahay. Caadi ahaan taasi maahan mid ba'an, laakiin waxaan aragnaa isbeddelo ku dhaca macaamiisheenna.
Tartamayaashaadu waxay hagaajinayaan taatikada mashiinka raadinta - Tartankaagu wuxuu isbedel ku samaynayaa goobahooda oo laga yaabee inay leeyihiin la-taliyeyaal waaweyn oo SEO ah oo caawinaya iyaga sidoo kale. Haddii aad si adag u qiimeyso oo aad dib ugu soo laabato maalgashiga, waa waqti uun ka hor inta aan tartankaagu bilaabmin maalgashiga istiraatiijiyad.
Istaraatijiyadaha shirkaddaada, badeecooyinka iyo adeegyada waa la beddelay - Sida ay shirkaddaadu uga soocnaato tartanka ayaa badiyaa isbeddela markii muddo ah markii aad korayso, yaraato ama aad horumariso astaamo, alaabooyin iyo adeegyo cusub. Qiyaasta raadintaadu waxay u baahan tahay inay la socoto tan.
Adeegsiga ereyga muhiimka ah - Mararka qaarkood, ereyada ay adeegsadayaashu ku baadhi doonaan sidoo kale way is beddelaan waqti ka dib. Tusaale ahaan, codsiga, madal, Iyo software dhammaantood waxay leeyihiin mugga raadinta kala duwan ee warshadaha teknolojiyadda. In kasta oo dhammaantood si isku mid ah looga wada faa'iideysan karo, haddana isticmaalkooda ayaa is beddelay caan ahaan muddo ka dib.
Isbeddelka mugga raadinta - Waqtiga maalinta, maalinta usbuuca, isbeddelada billaha iyo xilliyeedba waxay saameyn ku yeelan karaan raadinta. Fariintaada iyo waxa kujira waxay ubaahan karaan inay laqabsadaan
Teknolojiyadaha madalku waa is beddelaan - Waxaan aragnay qaar ka mid ah boggaga qurxoon ee gebi ahaanba laga waayey natiijooyinka raadinta tan iyo intii CMS lama hagaajin mana la xiriiro makiinadaha raadinta. Haddii aad haysatid CMS duug ah oo aan dib loo cusbooneysiin, waxaad u badan tahay inaad luminayso awoodda inaad ka faa'iideysato taraafikada mashiinka raadinta.
Meelaha khuseeya la beddelo - Wixii mar ahaan jiray barta ugu caansan ee warshadahaaga ayaa laga yaabaa inaanay mar dambe authority maamulka goobta is beddelin mar walba. Hubinta in bartaada loo dallacsiiyay goobaha ugu sarreeya waxay sii wadi doontaa kordhinta sumcadda iyo darajaynta bartaada.
Haysashada la-taliye ama rukumo socda oo leh adeeg bixiye weyn oo SEO ah ayaa shirkaddaada siin doonta dib-u-soo-celin wanaagsan oo ku saabsan maalgashiga haddii dalabka raadintu halkaas ka jiro. Haddii shirkaddaadu leedahay ilo gudaha ah oo ay kaga shaqeyso raadinta, rukhsad u tahay SEOmoz or gShiftLabs iyadoo qaar ka mid ah qalabka kormeerka ay mudan yihiin maalgashiga.
Markay macaamiisheennu awoodaan inay la socdaan isbeddeladan, waxaan sii wadaynaa inaan aragno soo noqoshada kororka maalgashiga, qiimahooda halkii hogaanba wuu sii socdaa, waxayna awood u leeyihiin inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​raadinta helitaanka macaamiil cusub. Waxay u baahan tahay kormeer joogto ah iyo horumarin, in kastoo. Haddii shirkaddaada ay weydiisato shirkad SEO ah oo leh lacag mashruuc oo heer sare ah halkaas oo ay ku hagaajin doonaan boggaaga lacag go'an oo ay iska socdaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dib uga fikirto maalgashiga.
Tags: natiijooyinka ganacsigacokefiidiyowga dib u eegista macaamiisha
Daily: Dib-u-cusbooneysiinta Wararka Dijital ah
Feb 5, 2011 markay ahayd 11:02 PM
Waxaan khibrad isku mid ah la yeeshay macaamiisha, waa nooc ka mid ah caqabadaha sharxaya macaamiisha muhiimada seo. Waan fahansanahay inay had iyo jeer doonayaan inay arkaan ROI, falanqaynta waxaan ku tusi karnaa qaar ka mid ah, laakiin waad saxantahay inay tahay dadaal socda.
Feb 5, 2011 markay ahayd 11:47 PM
Dhibaatooyin la mid ah ayaa i soo maray - hal macmiil ayaa yidhi waxay rabeen inay abuuraan degel, kor u qaadaan oo shaqeeyaan, ka dibna “SEO-optimize” ka dib markay toos ahayd. Waxaan isku dayaa inaan sharaxaad ka bixiyo in waxyaabaha ku jira ay muhiim u yihiin matoorada raadinta, waana wax aad u fudud in la bilaabo qorista iyadoo maskaxda lagu hayo. Dad badan ma helaan fikradaha aasaasiga ah ee SEO. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay sababta ay had iyo jeer u jiri doonto suuq loogu talagalay la-taliyeyaasha SEO!
Febraayo 10, 2011 saacadu markay tahay 12: 05 AM
Dhammaan aagagga Suuqgeynta Internetka, Raadinta Mashiinka Raadinta ayaa ah tan ugu khaldan, oo laga yaabo inay tahay tan ugu muhiimsan dadaalka suuqgeyntaada. Waxaa jira malaayiin milyan oo bogag ah oo ka kooban mareegaha - waxaad si adag u shaqeyn kartaa, dhisi kartaa goob aad u wanaagsan, ka dibna gebi ahaanba waad ku lumi kartaa isku shaandheynta. SEO waa muhiim. Sidoo kale waa hawl aad u qalafsan oo u baahan samir, qorshe taxaddar leh iyo qaab muddo dheer ah.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaan
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadka!
Waan kuugu raacsanahay!